ONYE ỌRỤ ICQ GỊ BỤ OGE OCHIE NA ENWEGHỊ NCHEBE. - ICQ - 2019
N'ọnọdụ ụfọdụ, mgbe ị na-amalite ICQ, onye ọrụ nwere ike ịhụ na ihuenyo ya ozi na ọdịnaya ndị a: "Onye ọrụ ICQ gị bụ oge ochie ma ọ bụ enweghị nchebe." Ihe kpatara nbata ozi dị otú ahụ bụ naanị otu - mbipụta nke ICQ.
Ozi a na-egosi na ọ bụ ugbu a adịghị mma iji ụdị arụnyere na kọmputa gị. Nke bụ eziokwu bụ na n'oge e kere ya, teknụzụ nchedo ya dị irè. Ma ugbu a, ndị omempụ na ndị omempụ amụtawo imebi nkà na ụzụ ndị a. Iji wepụ njehie a, ịkwesịrị ime otu ihe - melite usoro ICQ na ngwaọrụ gị.
Ntuziaka ntuziaka maka ICQ
Mbụ ị chọrọ inye nsụgharị nke ICQ dị na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka kọmputa nkịtị na Windows, ịchọrọ ịchọta ICQ na ndepụta mmemme nke menu Malite, mepee ya ma na-esote nkwụsị ụzọ nkedo pịa na wepu ụzọ mkpirisi (Uninstall ICQ).
Na iOS, gam akporo na ihe ntanetị ndị ọzọ, ị ga-eji mmemme dịka Master Master. Na Max os naanị ịkwesịrị ịmegharị usoro ihe omume ahụ na ahịhịa. Mgbe emebisịrị ihe omume ahụ, ịkwesịrị ibudata faịlụ ntinye site n'aka ụlọ ọrụ ICQ ahụ na-ahụ maka ya ma mee ya maka ntinye.
Ya mere, iji dozie nsogbu ahụ na ozi ahụ na-abanye "Onye ọrụ ICQ gị bụ oge ochie na enweghị nchebe," naanị ịkwesịrị imelite usoro ihe omume ahụ. Ọ na-eme maka ntakịrị ihe kpatara na ị nwere usoro ochie nke usoro ihe omume ahụ na kọmputa gị. Nke a dị ize ndụ n'ihi na ndị iro nwere ike ịnweta ohere nkeonwe gị. N'ezie, ọ dịghị onye chọrọ nke a. Ya mere, ICQ ga-emelite.